Ugboro abụọ gbuworo Gina na Marinus na sinima Proné Groningen: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 27 October 2019	• 24 Comments
isi mmalite: rtvnoord.nl
"Ọ wụrụ m akpata oyi n’ahụ. Na ihe di otua na eme na sinima, bu ebe onye obula nodu n ’oge ufodu ikiri ihe nkiri. Nke a bụ ihe dị omimi.Nke ahụ bụ mmeghachi omume nke onye kansụl obodo Marjet Woldhuis nke obere okirikiri 100% Groningen. Nke ahụ bụkwa mmetụta na-akpata oyi n'ahụ nke achọrọ iji nwee ike mejuputa iwu ọhụụ ma ọ bụrụ na anyị na-akpakọrịta PsyOp ọzọ. N'ezie nke ahụ enweghị ike ikwu; ị nweghị ike iche maka ya. Nke ahụ jọgburu onwe ya maka ndị mmadụ nwụnahụrụ na ndị agha troll (nke na-enyocha mkparịta ụka nke ndị na-elekọta mmadụ) ga-atụkwasị onwe gị. N’oge a nke teknụzụ miri emi, anyị ga-enwerịrị ntụkwasị obi na steeti na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-agaghị eme ya iwu iwebata iwu nke a na-agaghị anabata.
N'oge gara aga enwere okwu banyere iwu a ga-eji kpọchie ndị mmadụ na-enweghị enyemaka nke onye ọka ikpe ma ọ bụ ndị isi mgbaka. Arịrịọ sitere na saịtị a na ụfọdụ mmegide ndị ọzọ sitere na ọha mmadụ n'oge ahụ mere ụlọ nke abụọ nke mkpakọrịta ndị otu ụgwọ si Edith Schippers. Oge erubeghị maka ya. Ndị ahụ bu ụzọ hụ mkpa ọ dị. Ọ bụrụ na ndị Ruinerwold 'ezinụlọ dị egwu' dugara na mkpochapu ụzọ iji nwee ike ile anya n'azụ ụzọ ọ bụla na dịka ndị agbata obi ma ọ bụ ndị enyi n'oge na-adịghị anya. na ọgụgụ isi na-ekwe ka a kpọọ ma na-anakwere ụgwọ a, onye ọ bụla nwere ike banye n'ụlọ ọrụ GGZ ma ghara ịlaghachi. N ’ebe enwere ike itinye gị n’ ụlọ ịnọpụ iche n’enweghi ihe ọ bụla iji lebara anya ma ị nweta ọgwụ ị ga-elele iji mara ma ị na-eme ara.
"Ee, mana Vrijland. Ogbugbu a mere n'ezie. Amaara m ndị bi nso.","Amaara m ndị mmadụ nke ọma","Enwere m ndị enyị bi n'akụkụ ha","Ama m ndị bụ ndị ibe ha","Ama m ezinụlọ ahụ","enwere nkasi obi","ma ọ bụghị ya, abịa olili ahụ n'onwe gị, mgbe ahụ ị ga-ahụ ya","Ama m onye nwe ụlọ ọrụ ahụ","iwe ndị ikwu!","Ama m na Maazị Ergün a dị adị n'ezieYabụ na a ga-enwe ọtụtụ azịza. Ihe niile nwere ike ịbụ eziokwu, mana ugbu a anyị maara maka ịdị adị nke ogbu mmiri, anyị makwaara na ndị ọkachamara na - ahụ maka ọdịmma ndị ọkachamara na - enyocha ya. Ọzọkwa, ndị protagonists ahụ nwekwara ike inye ha akpa ego ma nwee njirimara ọhụrụ na Argentina, mana ewepụta ya. Deepfakes nwere ike ime agwa ọ bụla, gụnyere akụkọ ihe mere eme niile, yie ezigbo (gụọ lee otú ọrụ ahụ dị). I nwekwara ike isoro onye na-eme ihe nkiri na-eme arụ, ka ị ghara ịma. Can't nweghị ike ikwu ya. Ihe ọ bụla anyị mara, anyị maara site n’usoro mgbasa ozi na mgbasa ozi. Teknụzụ, ọ ga-ekwe omume itinye PsyOps ọnụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji ya webata iwu nke a na-agaghị anabatakarị, ị nwetala ihe mgbaru ọsọ gị.
Okwu ikpe a nwere ike ibute ọnọdụ nnabata maka bulie onye na-echegbu nsogbu ma ọ bụ onye ọ bụla na-akwadoghị iwu obodo. Mgbe ahụ ịtọla ntọala maka steeti ndị uwe ojii fascist na jaket woolen dị mma: wolf na uwe atụrụ.
Ndị uwe ojii ejiriworị anyị rịọ maka njirimara anyị. Nke ahụ mekwara n'okpuru ọchịchị '40 /' 45. Echetere m oge ị nwere ike ịga ije n'okporo ụzọ na-enweghị paspọtụ ma ọ bụ ID na enweghị onye jụrụ ajụjụ banyere ya. Ọ dịghị, ọlị, ọ bụghị ruo ọtụtụ afọ! Ọ bụ nanị isiokwu na-adịghị adị; ihe n'emeghị oke. Didn't wereghị paspọtụ ma ọ bụ NJ gị. A na-eji ndị ntorobịa nke oge a ịnwe NJ ha mgbe niile, n'ihi ụdị iwu dị iche iche na-eme ka ọ dị ike. Mata mgbe ị na-ere mmanya, mgbe ị na-abanye disko na ọtụtụ ikpe ndị ọzọ. Ma anyị chere na ọ bụ ihe dị mma, maka na enwere mgbe nsogbu dị mkpa mere iwebata ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe anyị hụrụ. N'ime arụmọrụ mmụọ (PsyOp), a na-ekepụta nsogbu nke nsogbu ndị na-elekọta mmadụ mgbe niile, a na-ebute nzaghachi (site na mmemme telivishọn dịka Pauw na mkparịta ụka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ) wee nyezie azịza ahụ. Nke ahụ bụ iwu ọhụrụ siri ike mgbe niile: steeti ndị uwe ojii.
N’oge na-adịghị anya, ọ bụghị naanị na igosiputa NJ gị bụ mpụ, kamakwa enwere ike ịpụpụ gị n’ụlọ gị n’enweghị mgbaghara yana n’enyeghị ihe kpatara ya. Mgbe ahụ ị nwere ike banye n'ime ụlọ GGZ na-enweghị windo, enwere ike ịnye gị usọbọ nke na-eme ka ị nwee ahụ ntakịrị ntakịrị nkụ. Ọ bụrụ na, mgbe awa ole na ole gasịrị, ị nọ ọdụ n'ime ụlọ ahụ na-enweghị windo wee malite igosi ụdị omume na-adịghị mma (dịka ọmụmaatụ, ị bụrụ onye a ga-akpọ claustrophobic), ọ nwere ike ịpụta na ị ga-abanye igwe igwe GGZ. Ọ dịghị oke oke ọkpa na ya. Ma ị nabatara iwu niile mere ka o kwe omume, n'ihi na ọ dị oke mkpa; maka igbu ọchụ Pathé, maka Anne Faber, maka Ruinerwold, maka, maka. Ọ dị ka ihe nkiri egwu bụ ebe onye ọ bụla na-anọdụ ala mgbe ụfọdụ ile ihe nkiri.
Anyị nzọ na ị na-echekwa na vidiyo dị n'okpuru: "Ọ ga-abụrịrị na nwoke ahụ kwesịrị ya, ọ ga-enwerịrị onye ọ na-enyo enyo" A ga-akpọbata ọtụtụ ndị ọzọ na ọnọdụ nnabata maka steeti ndị uwe ojii na-etinye ego.
Ị na-ele TV, usoro ma ọ bụ ihe nkiri kwa ụbọchị? Mgbe ahụ ị bụ oge zuru oke n'okpuru hypnosis ma ọ bụghị ihe dị njọ
Edeela ọtụtụ ihe banyere Trumanshow nke 'eziokwu' kwa ụbọchị.
Tags: mgbaru, agba, film, zara, akpata oyi, Gina, Groningen, Marinus, etiti, igbu ọchụ, © Pathé, psyop, -elekọta mmadụ
27 October 2019 na 11: 50
Ee, ọ gbara afọ 33…
27 October 2019 na 12: 47
Nọmba 33 bụ ihe atụrụ aka na ọha nzuzo nke ndị isi niile na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ikpe ziri ezi, iwu na mgbasa ozi so na ya.
Ha bụ ndị na-elekọta Trumanshow: Eziokwu ka ị na-ahụ ya.
27 October 2019 na 13: 08
Chee echiche ... tinyekwa obere vidiyo nke ndị uwe ojii jidere na Michigan mgbe egosighi NJ, enwere ike ịhazi ka ikwe ka ndị na-ekiri ahụ mara ndị uwe ojii na ụjọ ma ọ bụrụ na ị tinyeghị aka. .
Ọ bụ ezigbo ihe atụ nke steeti ndị uwe ojii na-etinyekarị ohere, ebe anyị na-ahụwanye na Netherlands. You ga-anabata iwu niile achọrọ maka nke a, n'ihi na i kpuchiri 'nsogbu nke nnukwu mmekọrịta mmadụ na ibe ya' site na mgbasa ozi.
27 October 2019 na 13: 16
Onu ogugu dika odi njikere maka ngbaghara nke ndi nwere “mgbagwoju anya” (nke nwere ike ibu akara nye ihe o bula… na ebe ndi Soviet Union nke mbu ana akpo ya ndi a na - adighi ekwuputa)
27 October 2019 na 13: 23
Echere m na agwa Ergün S sitere na Kramer sitere na Seinfeld 😉
27 October 2019 na 14: 44
Kramer bụkwa nwoke dị mgbagwoju anya ..
27 October 2019 na 15: 16
Nwanyị ahụ, onye nabatarala ụlọ ọgwụ, na-akọwa ndị agbata obi ya na ha onwe ha. "Ọ bụ 'ibi na ịhapụ ndụ' ebe a. Ọ dịghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụ asịrị banyere onwe. N'ụlọ ọ bụla, ha nwere ala nke aka ha ị bikwa na ya. Maka ndị ahụ e gburu, ka ha mere otu ihe ahụ. "
Ee ee .. yabụ ndị agbataobi amabeghị ha .. ma ọ bụ ..
O bu na imaghi?
27 October 2019 na 18: 31
Ọ dị ngwa ma dịkwa mfe ịmata .. ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ya! Martin, esorola m gị ogologo oge, site na mgbe ị gosipụtara m ọdịdị nke Micha Kat, enwere m nsọpụrụ gị ma m mụtara ọtụtụ ihe n'aka gị! Daalụ
27 October 2019 na 22: 24
Gini zuru ike John de Mol guru nke a? Ugbu a ndị agbata obi maara ndị ahụ metụtara nke ọma na mberede?!
27 October 2019 na 22: 27
Lee site na nkeji 9: 09…
27 October 2019 na 16: 09
Productiondị mmepụta a dị na sinima ... ọmarịcha
30 October 2019 na 06: 57
Nkeji nkeji 3.33, ọ nweghị enweta Sand Crazier ọ bụla.
27 October 2019 na 20: 46
De Telegraaf bụ iko ụwa na enceclopedia, kwa ụbọchị,
Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume?
De Telegraaf maara ihe ọ bụla? oge niile! ozugbo!
Super Columbo's, Sherlock Holmes ha nwere ebe ahụ.
Ha ma na ha bụ ndị ọcha na sinima ahụ.
Ha mara maka de Spook ụmụaka (na Drente) na ha gụrụ ezigbo akwụkwọ na telegraaf bụ naanị onye nwere ike ịgụ ebe ederede facebook nke ụmụaka. (mepee njikọ dị n'okpuru n'okpuru ya na ụdịdị incognito)
mana echefula Amsterdam, Hugo de Groot square.
Johny van de H na welly na Schoolenberg nwere bọlbụ diamond na-enweghị onye ọ bụla ọzọ, ha bụ agatha Christie agbụrụ ụwa, akụkọ niile ha maara ozugbo. (nkea bu dikwa ka imenye obi uto)
Achọrọ m nzọ maka katọn mmiri ara ehi, ziga Johny van de H maka klọọkụ nke mmiri ara ehi, ọ na-abịa na karama coke, ọ bụ naanị na anụmanụ. Ikekwe Matthijs N ga-eji nkwakọ ngwaahịa fristes isii laghachi, mgbe ahụ ọ gaara eme ike ya niile.
De Telegraaf maara ihe niile n'ime awa ole na ole! nne oma
28 October 2019 na 13: 52
Enwere ike ịgbakwunye na listi m: a ga-echedo ikike ịnabata nnabata na ụlọ nyocha ụbụrụ na-enweghị ikike ụlọ ikpe.
Ikike ịjụ ọgwụ ga-enwerịrị mgbe niile n'agbanyeghị ihe onye ọka ikpe na-eche.
(ikpebiri onwe gị na uche)
Achọrọ m ịmata ole ikike nke ndepụta a banyere afọ 10 ka dị irè, ngosipụta mara mma nke ọnọdụ ọha mmadụ ugbu a.
28 October 2019 na 18: 31
AD na-akọ, "GGZ chọrọ ịmanye ndị a na-enyo enyo sinema gburu ka aga-emeso". Dịka m kwuru: "Nsogbu, Mmeghachi, Ngwọta" kwupụta ụgwọ Edith Schippers site na gọọmentị gara aga. PsyOp?
N. Leeman dere, sị:
28 October 2019 na 23: 12
Enweelarị ụzọ ziri ezi na iwu onyinye. Ala-eze nke aru ahu ka emebi emebi n’iwu ya.
Gba ọgwụ mgbochi ogwu dị ugbu a n'izu ... na ndepụta ahụ a na-achọsi ike na-agaghị agwụcha.
30 October 2019 na 07: 01
Ha nhatan ff chipping, i gha eme.
30 October 2019 na 07: 06
AKASKỌ AH MostR The KWURU AK ,R,, Nwatakịrị Nwatakịrị Nke Se Hụrụla !,
30 October 2019 na 21: 07
Naanị isi ihe.
Edemede blogger (Martin Vrijland ebe a) egosiworị anyị ọtụtụ ihe na ihe omume ahụ na-emebi
ekwesighi ntụkwasị obi ma nke ahụ gosiputara site na disinfo ya na ya
na-ewepụ akụkọ dị mkpa dị iche iche.
Marinus enweghị aha nna?
gịnịkwa mere Gina enweghị aha ikpeazụ? mana afọ
enweghi nwa nwoke a na Korea?
Kedu ihe kpatara njem nke nwayọ dị ka ihe nzuzu, ọ dị anyị n'anya, dịkwa mkpa maka nhazi.
Kedu ihe kpatara eji amata ihe niile banyere onye mere ihe ahụ na ọ nweghị ihe gbasara ndị ahụ metụtara, ọ gaghị ekwe omume
Ọ na-eju ndị mmadụ anya? Dabere na edemede dị n'okpuru (njikọ) dịka onye agbataobi kwuru, kedu ihe ị chere onye agbata obi, ọ bụ chi ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu n'ezie, ihe na-agbagha, ọ na-agbagwoju gị anya mgbe otu ahihia riri ihe si na panki gị, mana ụjọ na-atụ gị Ihe omume di egwu.
Ndị mọbụrụ na-eme ka a na-anụ olu gị, ọ na-ada!
30 October 2019 na 21: 14
Chefuo ihe kpatara ya, I ju gi anya, na enweghi obi uto
Foto nke nwoke na nwanyị na-asachasị Marinus & Gina na Bios van Pathee na Groningen….
Ọ dị mma na ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ emepere emepe
30 October 2019 na 23: 20
Nwannem nwoke bụ onye njikwa na sinima ahụ wee bụrụ enyi na di na nwunye.
M ga-ajụ ma ọ chere na ọ bụ psy-op ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ahụbeghị oge n'ụsọ osimiri. Ekele diri unu!
31 October 2019 na 10: 17
Kedu aha nwunye nwanne gị, m ga - akpọ ya? Ajuju ajuju na oge o mere Adje?
Yabụ ịmara na ọ bụ enyi na di na nwunye, mana ọ gwabeghịghị ya okwu banyere ya?
Kedu ka isi mara na ọ bụ enyi na di na nwunye?
Ma ọ bụrụ na ha dị adị, ya na ha bụrụkwa enyi (nke, n'uche nke m, bụ nke dị iche, n'ihi na ndị na - ahụkarị abụghị ndị enyi na - ehicha), mgbe ahụ ọ ka ga - ekwe omume na ọ bụ PsyOp.
Adje ikekwe oke?
31 October 2019 na 17: 32
Apụla m n’amaghị ‘Adje’, a hụbeghị ihe ọ bụla e kwuru na mbụ Ọ gaghị ekwe omume na ọ bụ otu n’ime ụmụ nwoke nke edemede ahụ ma ọ bụ rụọ ọrụ dị ka ohu maka ụmụ nwoke nke edemede ahụ, ndị kpara nkata na ndị nduhie. . Ha mara ezigbo mma na nke a n'ihi na ndị mmadụ na-elo ihe niile.
31 October 2019 na 23: 06
Eziokwu ka ọ bụ ụgha… psy-op ma ọ bụ na ọ bụghị
Ekwela ka ezigbo nsogbu ịla n'iyi
Ọbụghị nkwupụta m…. Mana ekwuru ihe niile na ya.
Na mberede; ụma na - egbochi na / ma ọ bụ mmezi bụ otu ihe na-eme!
" Terroristgha na-eyi ọha egwu wakporo London, Manchester, Paris, Barcelona na Rotterdam na 23 na 24 October? (Melite)
Oghere ojii ahụ nke NASA sere foto bụ plasma plasma »
Nleta nile: 13.948.530